Hafotaka ny lalao, tsy ho diso fanantenana izay hanatrika - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Hafotaka ny lalao, tsy ho diso fanantenana izay hanatrika
Rasolonjatovo Willy il y a 10 jours
Sambany hisy izany combat ceinture izany amin’ny lalao extrême combat hatrehan’ireo mpilalao amin’ny sehatra kick boxing eto Madagasikara ny sabotsy 27 novambra 2021 ho avy izao. Tontosaina eny amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena eto Antananarivo.
Hisy tokoa ny lalao mafy ho tanterahana ny sabotsy 27 novambra izao hoy Maitre Boto Gilbert lehiben’ny club lion force ny sabotsy 20 novambra teny Mahamasina. Notontosaina nandritra io andro io manko ny antsapaka nahafantarana izay hifanandrana. Mpilalao avy eto Antananarivo sy avy any amin’ny faritra no hifanandrina amin’izany.
Hahita fahafinaretana tokoa ireo mpankafy ity taranja ity mandritra ity hetsika ity hoy ireo tompon’andraikitra. Hiady tokoa ny lalao raha ny fahitana ny antsapaka natao hoy ihany Atoa Boto Gilbert.
Tournoi 63.5kg ahitana an’i Jessy (Cobra) vs Faray (Scorpion).
Ary ny faharoa indray kosa dia Rojolalaina (F/tsia) vs Godfrey (Black Tigers).
Tournoi 70kg kosa indray dia ifanandrinan’i Voary Pierre (Scorpion) vs Birinod (A/be) sy Lava Mickaël (Cisco) vs Frank (AFKM).
Combat triangle dia ahitana an’ny Cassis (Codon) vs Gast Flash (3FB) ary i Heritiana.
Isan’ny taranja ahazoan’ny mpilalao malagasy medaly betsaka tokoa ity taranja ity rehefa manatrika lalao iraisam-pirenena isika. Betsaka ireo solofo dimbin’ny ala, saika mbola tanora avokoa ireo tonga nanao antsapaka hiatrika ity lalao amin’ny 27 novambra ho avy izao. Tsy dia misy firy ny fifaninanana tao ho ato noho ny fisian’ny valan’aretina covid19. Na dia izany aza anefa dia efa manomana ireo lalao iraisam-pirenena ihany koa ity taranja ity araka ny nambaran’ireo tompon’andraikitra mba hitazonana ireo vokatra azo rehetra teo aloha.
Mahatsara ny vokatra ny fisian’ny fifaninanana tahaka izao, irariana ny hisian’izany matetika. Sady manampy ireo mpilalao amin’ny traikefa no manazatra azy ireo ihany koa. Vao mainka tsara aza raha misy ny lalao iraisam-pirenena.